Toetrandro sy toetrandro any Bali " Journey-Assist - Weather in Bali mandritra ny volana maromaro
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali
Mampiavaka ny nosy Bali ny fananany maripana mitovy (na rivotra na rano) mandritra ny taona: + 27 ... + 30. Izany hoe maharitra mandritra ny taona ny fahavaratra!
Noho izany antony izany, mpizahatany maro no mitsidika an'i Bali mandritra ny taona. Tsy voafaritra mazava ny fizahantany fizahantany. Na izany aza, ny toetrandro amin'ny fotoana hafa dia mbola samy hafa (ohatra, tamin'ny Janoary sy jolay).
Sarintanin'ny toetr'andro any Bali
Ny orana any Bali
Vanim-potoana maina ao bali
Vanim-potoana hanaovana Surfing
Karazan-toetran'ny toetrandro mampitony Midika izany fa, satria akaiky ny ekoatera no misy i Bali, tsy misy ny fihenan'ny mari-pana mafana mandritra ny vanim-potoana niova. Ny maraina sy ny filentehan'ny masoandro koa eto dia saika isan'andro amin'ny fotoana mitovy (amin'ny 6 sy 18 ora). Mandritra ny andro, tsy miova firy ny mari-pana. Amin'ny alina, dia misy fihenana kely, fa na dia amin'ny alina aza dia afaka manao akanjo milamina fotsiny ianao. Ao Bali, tsy vanim-potoana 4, fa 2: maina (manomboka amin'ny aprily ka hatramin'ny oktobra) ary avy be ny orana (manomboka amin'ny volana novambra ka hatramin'ny martsa). Ny fotoana tsara indrindra miala sasatra amin'ity nosy ity dia tokony hoheverina ao amin'ny vanim-potoana maina. Izy io dia aseho amin'ny orana tsy fahita firy, ny mari-pana amin'ny antsipirany +28, ny hamandoana ambany.
Mandritra ny ririnina rosiana dia misy vanim-potoana orana any Bali, ny tampon'iny (ny oran'ny orana matetika indrindra) dia ny Desambra sy Janoary. Araka izany, amin'ny alin'ny Taom-baovao dia mety mila manao palitao eto ianao. Ny toetrandro mahafinaritra indrindra mandritra ny main-tany dia amin'ny Jolay sy Aogositra. Nandritra ireo volana ireo, Bali dia ambany kokoa sy mafana noho ny sisa amin'ity vanim-potoana ity.
Ny fotoanan'ny orana any Bali dia ratsy kokoa noho ny tany amin'ny firenen-kafa maro any Azia Atsimoatsinanana. Matetika ny orana eto, fa izy ireo, manomboka miadana haingana, mijanona tsy ho haingana ihany. Aorian'ny orana dia miposaka avy hatrany ny masoandro. Amin'ny ankapobeny, avy ny orana mandritra ny fotoanan'ny orana manokana amin'ny alina, ary rehefa maraina dia efa maina daholo ny zava-drehetra. Fa indraindray kosa ny orana mandritra ny andro. Amin'ity tranga ity, amin'ny maha-fitsipika azy, dia tsy maharitra mihoatra ny adiny roa ny orana ary mandalo indray mandeha isan'andro.
Na izany aza, misy vanim-potoana somary maivana ihany ny orana, ka mandritra izany dia avy ny orana tsy mihoatra ny in-droa isan-kerinandro, ary tena mafy, rehefa betsaka ny andro avy orana noho ny tara-masoandro mandritra ny volana. Amin'ny andro vitsivitsy, rahona ny andro manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, ary avy be ny orana mandritra ny andro. Mandritra ny vanim-potoanan'ny orana dia tsy tokony hivoaka ivelany ianao raha tsy misy elo, fa indraindray dia tsy ilaina mandritra ny herinandro maromaro ny elo. Inona no ho amin'ny herinandro ambony any Bali (maina na orana) - sarotra ny maminavina, miankina amin'ny vintana daholo izany. Fa mety tonga ihany koa ianao mandritra ny main-tany, izay saika tsy misy orana.
Vokatry ny orana
Ny volana volana janoary sy febroary no volana maripaka indrindra any Bali. Ankoatry ny rotsakorana sy ny rahona, ny fotoanan'ny orana dia misy fatiantoka hafa ihany koa eto. Ny voalohany dia ny hamandoan'ny rivotra avo be, izay mahatonga ny rivotra ho mafana kokoa noho ny tena izy. Tena tototry ny entana eto, indrindra amin'ny antoandro, indrindra raha tsy misy rahona eny amin'ny lanitra. Ho an'ireo olona tsy mahazaka ny hafanana dia toa mafana loatra ny fotoanan'ny orana. Fahavoazana iray hafa amin'ity vanim-potoana ity dia ny morontsiraka maloto. Ny maloto indrindra amin'izy ireo dia any Kuta, na dia toa tsara toa azy ireo aza ny torapasika any Canggu. Fa ny morontsiraka madio indrindra dia any Sanur sy Nusa Dua, satria diovina tsara kokoa izy ireo any. Na izany aza, ny potipoti-dranomasina dia miely hatraiza hatraiza.
Ny vanim-potoana orana any Bali koa dia misy tombony. Voalohany indrindra dia misy rivotra mafana sy rano ao anatiny. Ny hafanana dia manjaka amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro. Afaka mandeha manao akanjo maivana foana ianao. Tombony iray hafa amin'ny vanim-potoana orana dia ny fidiran'ny mpizahatany mandritra io vanim-potoana io dia somary latsaka kely raha oharina amin'ny vanin-taona maina, noho izany dia mora kokoa ny mamandrika trano honenana aorian'ny fahatongavany (afa-tsy ny Taom-baovao sy ny Noely katolika).
Raha sendra oram-be ianao mandritra ny fialantsasatra any Bali dia azonao atao ny manandrana miala amin'ny Nosy Gili. Any akaikin'i Bali no misy azy ireo, saingy tsy mitovy ny toetr'andro, mazava be matetika. Ny lakana haingam-pandeha dia mamela anao handeha an-tsambo avy any Bali mankany Gili mandritra ny ora maromaro.
Manomboka amin'ny volana aprily ny main-tany. Amin'ity volana ity dia manomboka mihalatsaka hatrany ny orana, mihena ny hamandoan'ny rivotra, miposaka ny fisotroana vaovao, izay entin'ny rivotra mahery. Ny vanin-taona maina dia ny volana Jolay sy Aogositra. Nandritra ireo volana ireo tany Bali ny hariva dia lasa mangatsiatsiaka kely mihitsy aza. Raha mitaingina môtô scooter amin'ny takarivan'ny hariva dia mila manao akanjo ba ianao, indraindray koa pataloha jeans. Matetika ny rivotra no mitsoka mandritra ny andro, ka ny rivotra madio sy mahafinaritra, tsy mafana toy ny ririnina. Izay rehetra tsy tia ny hafanana dia atoro hanatona an'i Fr. Bali dia amin'ny Jolay sy Aogositra.
Ny tsy fetezan'ny vanin-taona main-tany dia mpizahatany mirongatra kokoa, indrindra amin'ity volana jolay sy aogositra ity. Tsy mahazatra ny fiakaran'ny vidin'ny trano, koa ny safidy tsara dia mitaky famandrihana herinandro na volana maromaro alohan'ny hahatongavanao. Ny lesoka hafa dia ny rano amin'izao fotoana izao dia somary mangatsiaka kokoa raha oharina amin'ny vanim-potoana orana: ny maripana dia midina hatramin'ny + 26 ... + 27. Saingy mbola mafana ihany izy io raha milomano mandritra ny andro. Na izany aza, ireo mpizahatany izay mikasa ny hanao Surf, indrindra ny vao maraina sy hariva dia omena toro-lalana.
Vanim-potoana ho an'ny hilalao onja
Surfing eto amin'ity nosy ity dia azo atao mandritra ny taona maro. Na izany aza, tokony ho tsaroana fa amin'ny vanim-potoana samihafa dia tsy mety amin'ny fampiasa manokana azy ny sasany amin'ireo faritra mandeha amin'ny pasika.
Ohatra, amin'ny vanim-potoanan'ny orana dia tsy dia mifanentana amin'izany ny spot surf izay hita any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Bali: any Seminyak, Kuta, Prerenan, Chagu, Balangan ary Uluwatu. Amin'ny ankapobeny, ny Kuta iray manontolo mandritra ny tampon'ny vanim-potoana orana (Janoary sy Febroary) dia tsy ny toerana mety indrindra amin'ny fivezivezena, satria maloto be ny morontsiraka amin'izao fotoana izao. Ny anton'izany dia ny fanesorana ireo fako ho any amin'ny ranomasina amin'ireo renirano Bali mandritra ny vanim-potoana orana. Na izany aza, amin'ny vanim-potoanan'ny orana dia manomboka miasa eo amin'ny morontsiraka atsimo sy atsinanana ny toerana fialofana - any Nusa Dua, Keramas, Serangan, sns.
Mandritra ny vanin-taona maina, ny tena mety amin'ny fisafidianana dia azo antsoina hoe faritra any Canggu, Kut, any amin'ny saosy Peninsula (any Balangan, Chimbaran, Dreamland), ary koa amin'ny morontsiraka atsimo sy andrefana.
Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia mifandraika amin'ireo mpisera manana traikefa. Ho an'izay mianatra mianatra onjam-pianarana dia irahina ireny toerana ireny miasa tsy mandaitra. Eny tokoa, na dia misy ratsy aza ny onjan-drano, na izany aza misy vitsy dia vitsy, noho izany dia mora kokoa ny mitaingina, satria tsy misy olona manakantsakana.
Ny tampon'ny fotoam-pifamoivoizana any Bali
Ny fiakaran'ny vanim-potoan'ny onjan-drano any Bali dia manomboka amin'ny volana Mey ka hatrany am-piandohan'ny volana septambra. Mandritra io vanim-potoana io dia matetika misy onja lehibe, ary misy ny mpizahatany matetika manerana ny nosy. Ny toe-javatra farany dia misy fiantraikany amin'ny toe-javatra izay mitranga amin'ny rano: amin'ny ankabeazan'ny tsipika dia maro ny olona. Noho izany, mba hahazoana tratran'ny onja ampy dia ilaina ny traikefa. Etsy andaniny, ny vanim-potoanan'ny orana koa dia mety tsara amin'ny fampiofanana, satria ny haben'ny onjam-peo dia mifanaraka tsara amin'izany.
Any Bali, avo dia avo ny mari-pana amin'ny rano mandritra ny taona. Na izany aza, raha tonga ny vanim-potoana hatramin'ny volana Jona ka hatramin'ny Aogositra, raha toa ka tsy misy fanamafisana, dia asaina maka wetsuit fohy sy maivana ary ampy ny hatevin'ny 2 mm, satria somary mangatsiatsiaka fotsiny ny rano, ary raha tsy mandany adiny 2 na maromaro ao ianao. Na izany aza, mpizaka surf be dia be mandritra io vanim-potoana io dia tsy mampiasa wetsuit.